मेगा, एनबी र हिमालयन बैंकको ब्याजदर सार्वजनिक, कति प्रतिशतमा पाइन्छ ऋण ? – Clickmandu
मेगा, एनबी र हिमालयन बैंकको ब्याजदर सार्वजनिक, कति प्रतिशतमा पाइन्छ ऋण ?
क्लिकमान्डु २०७६ जेठ १ गते १२:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सञ्चालमा रहेको २८ वाणिज्य बैंकमध्ये बुधबार तीन वटा बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बेस रेट परिवर्तन भएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन् । बुधबार मेगा, नेपाल बंगलादेश र हिमालयन बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।
मेगा बैंकले यसअघि देखि नै दिँदै आएको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरलाई कायमै राखेको छ, यसमा कुनै पनि परिवर्तन गरेको छैन । मुद्दति निक्षेपमा संस्थागत ८.५० र व्यक्तिगततर्फ ९.२५ प्रतिशत ब्याजदर कायमै रहेको छ ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अन्तर्गत बचतमा न्यूनतम ०.५० देखि ६.५० प्रतिशत सम्म रहेको छ । ऋण लिन चाहनेहरुले बैंकले तोकेको बेस रेटसहित आफुलाई अनुकुल हुने ऋण लिन सक्नेछन् । बैंकको बसरेट १०.२० प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिने हो भने बेसरेटमा थप ० देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने छ ।
नविल, ग्लोबल, सेञ्चुरी र एसबिआइ बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कसको कति ?
यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बचततर्फ न्यूनतम ०.२५ देखि अधिकतम ६.५० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ । यस्तै बैंकले नयाँ बेसरेट पनि सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको बेसरेट १०.६९ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिनु परेमा बेसरेटमा १.५० देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर जोडिने छ । शिक्षा कर्जा लिनु परेमा बेसरेटमा १.५० देखि ५ प्रतिशत जोडिने छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ दिँदै आएको ९.२५ र संस्थागततर्फ दिँदै आएको ८.५० प्रतिशतलाई कायमै राखेको छ ।
यस्तै हिमालयन बैंकले नयाँ बेसरेटसहितको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको बेसरेट ९.१० प्रतिशत रहेको छ । बैंकले २.२० देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याद दिने जनाएको छ । बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट कर्जा लिनु परेमा बेसरेटसहित ५.२५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।
बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ दिँदै आएको ९.२५ र संस्थागततर्फ दिँदै आएको ८ प्रतिशतलाई कायमै राखेको छ ।
सामूहिक आवासः सुन्दर घरहरूका कुरुप कथा, बिनोद चौधरीदेखि इच्छाराज तामाङले यसरी ठगे
८० प्रतिशत बैंक बन्द हुन सक्छन्ः बिनोद चौधरी
भारतलाई चिढ्याउने सरकारको गतिविधि ठीक छैनः डा. बाबुराम भट्टराई
कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने
बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा
विद्युतीय माध्यमबाट सेयर खरिद बिक्री सुरु गर्ने, स्टक डिलर प्राथमिकतामा
कृषकले बाली उत्पादन भएपछि मात्रै बीमाको प्रिमियम तिर्न पाउने
कोरोना बीमाको शुल्क ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट